Ways तरीकाहरू तपाइँका ग्राहकहरूलाई अझ राम्ररी चिन्ने - चेकआउट | अगस्ट 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण चेकआउट समुदाय औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> चेकआउट >> Ways तरीकाहरू तपाइँका ग्राहकहरूलाई अझ राम्ररी चिन्ने
Ways तरीकाहरू तपाइँका ग्राहकहरूलाई अझ राम्ररी चिन्ने
फार्मासिस्ट-बिरामी सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ। केवल जब तपाइँको ग्राहकहरु लाई भरोसा छ र तपाइँको राय लाई महत्त्व दिईन्छ तिनीहरू चिकित्सा सल्लाह र प्रिस्क्रिप्शन प्रश्नहरुको उत्तर को लागी तपाइँको काउन्टर मा आउनेछन्।बिरामीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ; यो बिना, स्वास्थ्य उपचार अनुकूलन गर्न कुनै तरिका छैन, वर्णन गर्दछबेकीरुडिटर, मालिक र प्रमुख फार्मासिस्ट लिभिन्स्टन फार्मेसी न्यु जर्सीमा।
तपाईको ग्राहक दिनलाई चिन्ने के हो?
तपाईंको ग्राहक दिन चिन्नुहोस् प्रत्येक क्वार्टरको तेस्रो म Tuesday्गलबार मनाइन्छ, व्यवसायहरूको (र उनीहरूका कर्मचारीहरू) उनीहरूको स्टोरहरूमा संरक्षकहरूसँग कुराकानी गर्न र तिनीहरूलाई अझ राम्ररी चिन्नको लागि सम्झाइएको रूपमा।
यो एक मुस्कान संग मान्छे अभिवादन बाहिर हो। प्राय: तपाईं मात्र स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हुनुहुन्छ तपाईंको ग्राहकले उनीहरूको औषधीको बारेमा कुरा गर्ने छ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् तपाइँका ग्राहकहरूलाई चिन्न र राम्रो सम्बन्धलाई बढावा दिन।
Ways तरीकाहरू तपाइँका ग्राहकहरूलाई चिन्ने
१ आफ्नो परिचय दिनुहोस्।
जब तपाईं ग्राहकसँग च्याट गर्दै हुनुहुन्छ, नामबाट आफूलाई परिचय गराउनुहोस्, र बिरामीको नाम पर्चीबाट प्रयोग गर्नुहोस्। यसले आधारभूत पहिचानको स्तर सिर्जना गर्दछ। व्यवहार मनोवैज्ञानिक इलियट जाभा, Ed.D., MA , यस्तो प्रश्न सोधेर मुडलाई हल्का पार्ने सुझाव दिन्छ, के तपाईं मलाई मेरो ग्राहक वा बिरामीको रूपमा तपाईं उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ? ओह, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, मसँग राम्रो विचार छ! के म तपाईंलाई डायना भन्छु? एक रणनीति वा एक नियोजित कुराकानी बिन्दु को लागी scratch बाट सम्बन्ध स्थापित गर्न सजिलो बनाउन सक्छ।
त्यसो भए, जब तपाईले आधारभूत चीजहरू पाउनुभयो, बिरामीहरूलाई फार्मेसीको लागि सीधा नम्बर दिनुहोस्, र उनीहरूलाई फोन गर्नुहोस् र तपाईंसँग कुरा गर्न सोध्नुहोस्। भन्नुहोस्, मलाई पक्का छ अन्य फार्मासिष्टहरू वा फार्मेसी टेकले पनि तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छ। डा। जाभा सुझाव दिन्छन्, तर म सँधै तपाईको राम्रो ख्याल राख्छु।
२. प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
अर्थपूर्ण कुराकानीहरू सुरू गर्नुहोस्, जस्तो कि तपाईं एक साथी वा परिवारको सदस्यसँग हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईको बिरामीको जवाफ सुन्नुहोस्। सुरुमा, तपाईले कुरा गर्न को लागी खोजी गर्नुपर्नेछ। प्रिस्क्रिप्शनबाट संकेतहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई बिरामीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि कसरी उनीहरु उनीहरु बस्ने को छिमेकहरु लाई मन पर्छ, आफ्नो फाइल मा ठेगाना को आधार मा। डा।रुडिटरसोध्ने सुझाव दिन्छ,तपाई कहाँ हुर्कनु भयो? तपाईंको मनपर्ने गतिविधिहरू के के हुन्? तपाई कहाँ यात्रा गर्न मन पराउनुहुन्छ? तिनीहरू सबै प्रश्नहरू हुन् जुन आरामदायी र मैत्री हुन्छन्, यद्यपि भविष्यमा चिकित्सकीय सल्लाहको साथ सहयोग गर्ने उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दछन्।
त्यहाँ सियालिसको लागि जेनेरिक बराबर छ
उनीहरूले सामना गरिरहेका समस्या र सरोकारहरू सुन्न समय दिएर समानुभूति देखाउनुहोस्। उनीहरूले के भनेका छोटकरीमा र फलो-अप प्रश्नहरू सोधेर अझ बढी साझेदारी गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। जब कसैले व्यक्तिगत कुरा साझा गर्दछ, भन्नुहोस्, त्यो साझेदारीको लागि धन्यवाद, डा। जाभा सुझाव दिन्छन्। तपाईंको बिरामीहरूलाई तपाईं साझेदारहरू भएको महसुस गराउने प्रयास गर्नुहोस्, उनीहरूको लागि उत्तम समाधानको लागि सँगै काम गर्दै।
A. व्यक्तिगत स्पर्श थप्नुहोस्।
यदि तपाईको बिरामीको बच्चाको बारेमा कुराकानी भएको थियो भने सोकर याद गर्नुहोस् को लागी सोकर खेल कसरी चल्यो। तपाईंले कुरा गर्नुभएका चीजहरूको एक नोट बनाउनुहोस्, त्यसैले अर्को पटक तिनीहरूले भ्रमण गर्दा तपाईं इटालीको यात्राको बारेमा सोध्न सम्झन सक्नुहुन्छ।
डाक्टर रुडिटर सुझाव दिन्छन् कि उनीहरूले लिईएको प्रिस्क्रिप्शनमा सल्लाह दिनुहोस्। यदि तपाईंलाई बिरामीको रूचि थाहा छ भने, यसले जटिल औषधी विकल्पहरूको व्याख्या गर्न सजिलो बनाउन सक्छ। तपाईका बिरामीहरूको बारेमा जान्नु भनेको फार्मासिष्ट परामर्शको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउन सकिन्छ, फ्यार्मेडी, क्यार्मिन युनिभर्सिटी अफ कनेक्टिकट स्कूल अफ फार्मेसीका सहयोगी क्लिनिकल प्रोफेसर। मेरो एक बिरामी, जो एक मेकानिक थियो, मधुमेहका लागि औषधीको बारेमा बढी जान्न चाहान्थे। मैले विभिन्न विकल्पहरू र कारहरूका मोडेलहरूसँग तुलना गरेर मैले उनका छनौटहरूको वर्णन गरे। उनले यो हँसीमात्र फेला पारेन तर भने कि यसले उनलाई आफ्नो विकल्पहरू राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्‍यो।
जब ग्राहकहरू यस्तो महसुस गर्छन् कि तपाईंले तिनीहरूलाई विशेष ध्यान दिईरहनु भएको छ, वा ती उनीहरूको औषधी भन्दा बढि छन् भने, उनीहरूले अर्को पटक कुराकानी गरे पछि उनीहरूले पनि साझा गर्न सक्ने सम्भावना छ। यदि कोही फार्मेसी काउन्टरमा नयाँ जाँच गर्दछ, तर एक प्रिस्क्रिप्शन लिईरहेको छैन भने, सोध्नुहोस् कि उनीहरूले तिनिहरूको स्टोरमा उनीहरूको पर्चाहरू भर्छन् कि भनेर। यदि होईन भने, किन सोध्नुहोस्, डा। जाफा सुझाव दिन्छन्। उनीहरूको प्रिस्क्रिप्शनहरू हस्तान्तरण गर्न यसले के लिन सक्दछ पत्ता लगाउनुहोस्, र प्रक्रियामा, तपाईं नयाँ राजस्व स्ट्रिम खोल्न सक्नुहुन्छ।
फ्लू ए र बी बीच के भिन्नता छ?
Your. बिरामीको समयलाई सम्मान गर्नुहोस्।
यो उनीहरूको पर्ची तयार हुनुभन्दा पहिले फार्मेसीमा रोक्नको लागि कति लामो पर्खाइमा तिनीहरूलाई बताउनु सजिलो हुन सक्छ। वा, यदि तपाईले प्रिस्क्रिप्शन पूरा गर्न उत्पादको अर्डर गर्नु छ भने उनीहरूलाई यो थाहा दिनुहोस् कि यो कति समय सम्म आउँदैन। बिरामीहरूलाई उनीहरू भित्र आउनु भन्दा पहिले कल गर्न सक्छन् भन्नुहोस्, ताकि यदि औषधि उपचार नभएमा तिनीहरूले यात्रा बचत गर्न सक्दछन्। t अझै सम्म।
Patients. बिरामीहरुलाई सूचित र अप-टु-डेट राख्नुहोस्।
जब बिरामीहरू फार्मेसीमा आउँछन्, उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् यदि त्यहाँ कुनै नयाँ प्रिस्क्रिप्शन वा उत्पादन छ जुन उनीहरूको सर्तको आधारमा उनीहरूको लागि राम्रो काम गर्दछ। प्रिस्क्रिप्शन ब्यागमा उडानकर्ताहरू संलग्न गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो, तर त्यहाँ सामाजिक मिडिया, साइनेज, र अखबारको विज्ञापनहरू पनि छन्, डा रुडिटर भन्छन्।
वा, यदि तपाईंले निर्माता कूपन वा एकल कार्डको रूपमा बचत कार्डको बारेमा सुन्नुभयो जुन एक औषधि लागत कम गर्न सक्दछ, तिनीहरूलाई भन्नुहोस्! जब तपाईं ग्राहकहरूबाट उत्तम मूल्य प्राप्त गर्न बाहिर जानुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंलाई सम्झना गर्नेछन्, र तपाईंको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छन्।
सम्बन्धित: Ways तरीकाले फार्मासिष्टहरूले स्वास्थ्य साक्षरता सुधार गर्न सक्दछन्
Patients. बिरामीहरूलाई तपाईको ख्याल राख्नुहोस्।
जब व्यक्ति फार्मेसीमा उत्तम चिसो र फ्लू औषधीको लागि सिफारिस सोध्न आउँदछन्, तिनीहरूलाई सेल्फमा पुग्ने भन्दा बढि एक कदम जानुहोस्। फार्मेसीबाट बाहिर निस्किनुहोस् र तिनीहरूसँगै हिंड्नुहोस्, तपाईंले सिफारिस गर्नु भएको उत्पादन छान्नुहोस् र तपाईंलाई किन उत्तम लाग्छ भनेर वर्णन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि बिरामीहरूले पहिलो चोटि नयाँ औषधि प्रयोग गर्दैछन् भने, उनीहरूको लागि यसले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर जान्नुहोस्। सब भन्दा व्यक्तिगत र सब भन्दा चाँडो तरीका भनेको साधारण फोन कल हो। 'तिमिलाई कस्तो लाग्दै छ? नयाँ औषधी तपाईका लागि कसरी काम गरिरहेको छ? के तपाइँसँग केहि प्रश्नहरू छन् जुन मैले मद्दत गर्न सक्छु, 'डा।रुडिटर।१०० मध्ये ety times पटक यो patient० सेकेन्डको कुराकानी भन्दा कम हो जुन महत्त्वपूर्ण बिरामी / प्रदायक सम्बन्ध स्थापना गर्न लामो यात्रामा जान्छ।
तपाइँ कसरी तपाइँको ग्राहक दिन जान्न मनाउनुहुन्छ? हामीलाई ग्राहकहरु लाई चिन्नको लागि थप विचारहरू दिनुहोस् फेसबुक ।
A1C मा 411: सामान्य A1C स्तर र उच्च A1C कम गर्न १ ways तरिकाहरू
48 घण्टा पछि योजना बी को प्रभावकारिता
prevacid मा सक्रिय घटक के हो
लिपिटरको लागि जेनेरिक औषधि के हो?
topiramate 25 मिलीग्राम वजन घटाउन को लागी प्रयोग गरीयो
एजीथ्रोमाइसिन लिने बित्तिकै तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ
भिनेगर पिउँदा शरीरलाई के हुन्छ